ngwongwo na ọrụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Rubric: ngwaahịa na ọrụ
Olee ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya bụ ndị a na-ewere dị ka ndị dị mma? Ntak-a
Olee ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya bụ ndị a na-ewere dị ka ndị dị mma? Ntak-a Ọ bụ ikike nke onye ọrụ ya na-ekpebi ikike nke mmanya na-aba n'anya. Ndị na-eri nri, mmanya, mmanya na-egbu egbu na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ na-aba n'anya bụ nke, n'oge mmepụta ihe, na-eme usoro ịka nká na nkpu osisi oak (karịsịa oak ...
Ebee ka etinye ihe ndị nwụrụ anwụ?
Ebee ka etinye ihe ndị nwụrụ anwụ? Ọ bụrụ na onye ahụ nwụrụ anwụ nwere ọrịa akpụkpọ ahụ, mgbe ahụ, ịchọrọ ọkụ, ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ kesaa ndị ogbenye na ụmụ mgbei ma ọ bụ ndị agadi (ndị ogbenye) aka. Maka onye nwụrụ anwụ ọ ga-abụ ụgwọ ọrụ. ...
Kedu ka ị ga-esi jụ onye nwe ego?
Kedu ka ị ga-esi jụ onye nwe ego? Gwa na ngwa maka ngwaahịa gị (ọrụ) abawanyela ugbu a na ị na-atụle ịzụ ahịa. E nwere ọtụtụ ndị dị njikere, ha na-ekwu, ma ị naghị eme ka onye ọ bụla kwenye, ma ị bụ nke anyị ...
Ị na-azụ ihe na ụlọ ahịa "niile na 39", wdg.
Ị na-azụ ihe na ụlọ ahịa "niile na 39", wdg. Na obodo anyị, enweela ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe ndị dị n'akụkụ ụlọ, otu dị otú ahụ, m na-azụta ihe na ...
Gwa m ihe m ga-enye mama na afọ 35?
Gwa m ihe m ga-enye mama na afọ 35? Amaghị m ihe mama gị nwere, ma m ga-edepụta nhọrọ ole na ole ma nwee ike ịkwado gị. Maka mmalite, okooko osisi (nke o ...
Kedu iji wepu 5022 ndebanye na Megaphone?
Ihe na 03.09.2018 18.09.2018
Kedu iji wepu 5022 ndebanye na Megaphone? Iji wepu aha gị na ntinye aha na-enweghị isi, zipu ozi ederede nke nwere ụdị njirimara Mba ma ọ bụ wepu aha na nọmba 5022. A ga-agbanyụ ọrụ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Ọ bụrụ na i nweghị ike ...
Kedu koodu onye ọrụ mkpanaka (mobile) nke malitere site na 982?
Kedu koodu onye ọrụ mkpanaka (mobile) nke malitere site na 982? Code 982 na-eji MTS ma ọ bụ Mobile Tele Systems, dịka ọmụmaatụ, na Perm Territory, Mpaghara Kurgan na Mpaghara Chelyabinsk. Enwere m oke ...
Ọ dị ọnụ ala karịa iji kpochapụ kapet na-ehicha ma ọ bụ ịzụta kapeeti ọhụrụ?
Ọ dị ọnụ ala karịa iji kpochapụ kapet na-ehicha ma ọ bụ ịzụta kapeeti ọhụrụ? Na nhicha akọrọ na-enwe mmechuihu. Ozugbo o yiri ka ihe niile dị mma na dịka ọhụụ, na otu ọnwa mgbe e mesịrị, ndị agadi tụrụ anya wee pụta ...
Kedu akpụkpọ ụkwụ na-adị ọkụ site na mmetụta ma ọ bụ chee?
Kedu akpụkpọ ụkwụ na-adị ọkụ site na mmetụta ma ọ bụ chee? Valenoks, ma ọ bụrụ na anaghị m ezighi ezi, naanị mee ka obi dị gị mma. Ọ dị mma, n'agbanyeghị na ọ bụ otu ihe ahụ, ọ bụ ihe ndị ọzọ dị nro na nke dị nro. Site na ...
Ịṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụrụ na ị gwakọtara mmiri, ị nwere ike ịṅụ mmanya? Gịnị ga-eme?
Ịṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụrụ na ị gwakọtara mmiri, ị nwere ike ịṅụ mmanya? Gịnị ga-eme? Ihe mejupụtara mmanụ ọkụ akwara hexamethylenetetramine (hexamine) na obere paraffin. N'agbanyeghị aha a, ha enweghị ihe ọ bụla metụtara mmanya. Mmiri ...
Kedu ihe bụ diamond?
Gịnị bụ diamondite? Otu okwute bụ ọla edo nke ejirila rụọ, i.e. bee, ọ mara mma, maa mma ma banye n’ime obere mgbanaka gị. Na tupu mbepu ahụ, ọ bụ ola edo ka etinyere…
"niile site na 38" Kwụsị ahịa ụlọ ahịa nkịtị?
"niile site na 38" Kwụsị ahịa ụlọ ahịa nkịtị? Ugbua ụlọ ahịa a agafeworị. Ugbu a, ihe niile dị na 41 ruble. Ahịa ndị nkịtị Chinese junk, mere maka otu ma ọ bụ abụọ ụbọchị. E nwere ndị dị mkpa na ...
Kedu otu esi etinye mgbasa ozi na Avito?
Kedu otu esi etinye mgbasa ozi na Avito? Iji tinye mgbasa ozi na weebụsaịtị Avito, ịkwesịrị ịdebanye aha dịka onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ, tinye aha gị, adreesị ozi-e, mepụta ma weghachi paswọọdụ.
Kedu otu esi ahọrọ okpu?
Kedu otu esi ahọrọ okpu? Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ okpu, ị ga-ebu ụzọ gee ntị na oge, ya bụ, maka oge ọ bụla ị ga-azụ ya, kpebie àgwà nke ihe ọ ga-abụ ...
Ọ dị m mkpa ihichapu envelopu ahụ maka ịhapụ nwa ọhụrụ?
Ọ dị m mkpa ihichapu envelopu ahụ maka ịhapụ nwa ọhụrụ? Ihe niile ị na-eme atụmatụ ime nwa ọhụrụ, ọ dị gị mkpa ịsacha na ígwè, n'ihi na obere nwoke ahụ nwere ike ịdaba na ọrịa ọ bụla ...
Ego ole ka ọ bụ ultrabook?
Ego ole ka ọ bụ ultrabook? Ego ole ka ego nke ultrabook na-efu? Ebe a bụ ụgwọ ahịa ultrabook maka ndị na-azụ ahịa dị na mpaghara dịka pcmag website. Ibe akwukwo ọ bụ ezie na na Bekee, ozi nhazi ga-edo anya. Maka ahịa: ...
Ọ bụ eziokwu na a ga-emechi Market Market? Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe?
Ọ bụ eziokwu na Ahịa Ubi a ga-emechi? Ọ bụrụ na ọ bụ, olee mgbe? Ee, Onye Ubi n’ahịa, ihe nwute, bu nke emechiri emechi. Ha chọrọ iwu nnukwu ụlọ ahịa na saịtị nke ahịa. N’ezie, ọgụ a na-ebuso ndị na - akwaga mba ọzọ bụkwa…
Iwu na Quelle na Bonprix katatara. Kedu ụlọ ahịa ịntanetị ga-ahọrọ?
Iwu na katalọgụ Quelle na Bonprix. Kedu ụlọ ahịa n'ịntanetị ka amasị gị? Ọ dị mma, m na-adụ gị ọdụ ka ị ghara ịtụ ebe ọ bụla - ụlọ ahịa a niile na-adọta oge a kara aka, ọnụahịa ha anaghị anabata ebe ahụ - enwere m ike ...
Ego ole ka ego ga-ebufe na mail mgbe o zigachara ọkwa ahụ?
Ego ole ka ego ga-ebufe na mail mgbe o zigachara ọkwa ahụ? Nakolko Amaara m, ego a ga-akwụnye na mail ga-echere gị otu ọnwa, mgbe ahụ, a ga-ezigaghachi ego ahụ. M dị nso na nso nso ...
Kedu ihe ị chọrọ ịma mgbe ị na-agbazinye ego?
Kedu ihe ị chọrọ ịma mgbe ị na-agbazinye ego? Jide n'aka na ị gụọ nkwekọrịta ahụ, obere akwụkwọ ozi ọ bụla. Mee ka ụlọ akụ ahụ ghara ịghọta ihe ma jide n'aka na ị ga-ajụ banyere ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya. Ma karịa ihe niile, tupu iwere ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,592.